သူမကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည့် ကောင်လေးများအနေဖြင့် စားမဝင် အိပ်မပျော်ဖြစ်သွားနိုင်လောက်အောင် လှပလွန်းလှသည့် ဆေးကျောင်းသူလေး
Cele To Your News Feed
ဆရာဝန်ဆိုသည်မှာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအခန်းဂဏ္ဍအတွက် အဓိကကျသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ကျန်းမာခြင်းသည် လာဏ်တစ်ပါးဟုဆိုသည့်အတိုင်း နေးကောင်းမှသာလျှင် အရာရာကို စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတွင်လည်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ Liဆိုသည့် အသက်၂၅နှစ်အရွယ်ဆေးကျောင်းသူလေးဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံတွင် ဆေးပညာသင်ကြားနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူမ၏ ချောမောလှပမှုနှင့် ဂုဏ်ပုဒ်တို့ကြောင့် ကျော်ကြားနေခဲ့ပြီး သူမ၏လှပမှုဟာ မင်းသမီးရှုံးသော အလှမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်ရောဂါလောက်အနေဖြင့် သူမကိုမြင်တွေ့လိုက်သည်နှင့်ပင် ရောဂါသက်သာသွားနိုင်အောင် လှပနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်း ဆေးကျောင်းသူလေးကို ကောင်လေးအများစုက သဘောကျကာ လိုချင်နေခဲ့ကြပြီး သာမန်ကောင်လေးတွေဆိုလျှင် မြင်လိုက်သည်နှင့် ရူးသွားလောက်ပါတယ်။
Shoon (Cele Daily)
ဆရာဝန္ဆိုသည္မွာ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအခန္းဂ႑အတြက္ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။က်န္းမာျခင္းသည္ လာဏ္တစ္ပါးဟုဆိုသည့္အတိုင္း ေနးေကာင္းမွသာလွ်င္ အရာရာကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုတြင္လည္း ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမွ Liဆိုသည့္ အသက္၂၅ႏွစ္အ႐ြယ္ေဆးေက်ာင္းသူေလးဟာ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ပါတယ္။သူမ၏ ေခ်ာေမာလွပမႈႏွင့္ ဂုဏ္ပုဒ္တို႔ေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေနခဲ့ၿပီး သူမ၏လွပမႈဟာ မင္းသမီးရႈံးေသာ အလွမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သာမန္ေရာဂါေလာက္အေနျဖင့္ သူမကိုျမင္ေတြ႕လိုက္သည္ႏွင့္ပင္ ေရာဂါသက္သာသြားႏိုင္ေအာင္ လွပေနခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေဆးေက်ာင္းသူေလးကို ေကာင္ေလးအမ်ားစုက သေဘာက်ကာ လိုခ်င္ေနခဲ့ၾကၿပီး သာမန္ေကာင္ေလးေတြဆိုလွ်င္ ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ႐ူးသြားေလာက္ပါတယ္။
အသက်၂၀ ပိုငယ်သည့်ချစ်သူကောင်မလေး၏မိဘများတွင်ရှိနေသော အကြွေးသန်း၃၀ကိုဆပ်ပေးပြီး မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ယူခဲ့သည့်အသက်၄၁နှစ်အရွယ်အမျိုးသား
အလုပ်ပိတ်ရက်လေးမှာအေးဆေးနားရမလားဆိုပြီး ကမ်းခြေသို့အလည်သွားခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီကဖုန်းဆက်ပြီးအလုပ်ခိုင်းနေလို့ လေထီးစီးရင်အလုပ်လုပ်နေရသည့်အမျိုးသား၏အဖြစ်
ကိုရင်များကို လှူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းများထဲတွင် အဖော်များ ပါလာသဖြင့် ဘုန်းကြီး ဒေါသထွက်
သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှ မွေးကြိုင်သင်းပျံလှတဲ့ကိုယ်သင်းရနံတွေကြောင့် လူတွေကနေ့တိုင်းလိုလိုပင်အနံ့လာရှူခြင်းကိုခံနေရသည့် ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်အမျိုးသမီး
အသံထက် (၅) ဆပိုမြန်တဲ့ ဒုံးကျည်ကို စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှု အောင်မြင်ပြီ (အမေရိကန်မှာပါ)
ရုရှားသမ္မပူတင် ဆင်နွှဲခဲ့သော စစ်ပွဲများ
ရုရှားကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာကုန်ပြီဖြစ်တဲ့ မော်တော်ကားကုမ္ပဏီများ…..
႐ုရွား၏ ကမာၻ႔အဖ်က္စြမ္းအားအျမင့္ဆုံး န်ဴကလီးယားမဟုတ္ေသာ FOAB ဗုံးမ်ား ( ဗုံးမ်ား၏ဖခင္ဟု တင္စားေခၚဆိုသည့္ Father-of-All-Bombs )
က်င့္ဖ်င္နဲ႔ လည္ပင္းဖက္ေပါင္းေနတဲ့ ပူတင္ဆီမွာ ဘာလက္နက္ဆန္းေတြ ရွိမလဲလို႔ ဘိုင္ဒန္က ေအာက္ဖဲလွန္ရႈိးလိုက္တာ ( အမွန္ အေျဖကဒါပဲ ! )
ႏွစ္ ၃၀၀ သက္တမ္းရွိ ထူးျခားတဲ့အသြင္သ႑ာန္နဲ႔ သစ္ပင္ကို ေဒါင္ သန္း 500 ေပးေခ်ခဲ့ေပမဲ့ မေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား
ကလေးကိုဗိုက်ခွဲမွေးချင်သော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ လက်မှတ်မထိုးပေးတာကြောင့် ရိုးရိုးမွေးမွေးပြီးချင်းမှာပဲ ဒေါသတကြီးနဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို ရန်လုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး
လစဥ်အိမ်ငှားခကို ပုံမှန်ပေးခဲ့ရသော်လည်း ၈နှစ်အကြာမှ ထိုအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မှာ ဇနီးသည်ဖြစ်နေကြောင်း သိခဲ့ရ၍ ဝမ်းနည်းကြေကွဲသွားသော ခင်ပွန်း
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး လျှို့ဝှက်မြေပြင် ကြားဖြတ်စက်အကြောင်း
ထိုင္းမင္းသမီးTangmo Pattaratira ကို ေလွေပၚမွတြန္းခ်တဲ့ cctv မွတ္တမ္းထြက္ေပၚ
ခန္းဝင္ပစၥည္းအျဖစ္ ၁၀ သန္းတန္ လွပတဲ့ ကြၽဲႏွစ္ေကာင္နဲ႔ ဆရာဝန္ဘြဲ႕ရမိန္းကေလးကို လက္ထပ္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္သားေလး
ရုရှားက အလျှော့ပေးရတဲ့ အဆင့်စရောက်လာပြီ
ယခင်က နုပျိုလှပတဲ့ နာမည်ကြီးမော်ဒယ်ဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးပုံကို ဝေမျှလာပြီးနောက် ပရိသတ်များ အံ့အားသင့်ခဲ့ရ
သခွားသီးအစား ပီလောပီနံဥနှင့်ကမြင်းမိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်
လူတစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် တစ်စင်းစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ရှေ့တိုင်းမှာ လေယာဉ်ပါကင်ထိုးထားလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်နေရာ
အရမ်းကြီးမားတဲ့ ရေသတ္တဝါတကောင်အလောင်းကို အင်ဒိုနီးရှားကမ်းခြေ‌တွင်‌ေတွ့ရှိ
Copyright © 2022 CeleCloud. Cream Magazine by Themebeez